10 Omumaatu nke ikike ọgụgụ isi na ndụ anyị kwa ụbọchị - LucidPix
Kwere ma ọ bụ na ị ekweghị, #Amamịghe echiche gbara anyị gburugburu! #iheanacho # 3d # 3dphoto #ai # igwe igwe #deeplearning # Onye oru ahia # nwachukwu #onwedriagwa
Tongue Irebou steeti ji nwayọ - xangeb
Lelee TikTok anyị maka nchịkọta ngwa ngwa!
Mgbe ọtụtụ mmadụ na-eche banyere ọgụgụ isi mmadụ (AI), ha na-eche igwe ndị na-amụ etu esi eche echiche dị ka ụmụ mmadụ na sinima-fim dịka Star Wars na Terminator. AI na mmụta igwe nwere ike ịdị ka echiche, ihe ọdịnihu, mana n'eziokwu, enwere ọtụtụ ihe na teknụzụ dị ugbu a na-eji AI — ha niile na-enye anyị ike ma na-enyere anyị aka ịga ọrụ anyị kwa ụbọchị. Nke a bụ ndepụta nke ụzọ 10 dị mma nke ọgụgụ isi mmadụ na-arụ ọrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị.
1. Ngwa ntughari
Kwere ya ma ọ bụ na ị ekweghị, ọbụlagodi na ị na-agagharị ma na-alọta ọrụ kwa ụbọchị chọrọ iji ọgụgụ isi eme ihe. Ngwa ngagharị dịka Maapụ Google na-eji AI iji nyochaa etu ngaghari ije di. Ọ na-abanyekwa ihe ndị ọrụ mere kọrọ, dịka ihe ọghọm okporo ụzọ ma ọ bụ iwu ụzọ, ruo buru amụma ogologo oge ọ ga-ewe gị iji ruo ebe ị na-aga ma na-eji ozi ahụ na-atụ aro maka ụzọ kachasị ọsọ.
2. Ngwa ngwa Rideshare
Ugbu a were ya kama iwere onwe gị rụọ ọrụ, ịhọrọ iwere Uber gaa n'ọfịs gị. Kedụ ka sọftụre ngwa ga-esi ekpebi ọnụahịa njem gị ma ọ bụ oge ichere ozugbo ị kpọrọ Uber? Azịza ya bụ mmụta igwe, ihe atụ ọzọ nke ọgụgụ isi. Dabere na Isi Uber of Machine Learning Danny Lange kwuru, oge nchere nke onye na-agba ya “sitere na data si n'ọtụtụ nde njem, nke na-eme ka [Uber] chebara usoro a na-eme kwa ụbọchị echiche.”
3. Ihe osise 3D
Ihe osise 3D aburula uzo di egwu ma jide foto na igosi ya. Na Ngwa LucidPix, dịka ọmụmaatụ, na-enye gị ohere ijide Foto 3D ma ọ bụ tọghata foto 2D ka 3D na-enweghị mkpa maka ọtụtụ igwefoto. Ndị toro eto ọgụgụ isi na-eme n'azụ LucidPix na-enwe ike ịkọwa ihe akụkụ foto gị nwere ogo miri emi ma e jiri ya tụnyere akụkụ ndị ọzọ nke foto gị. Mgbe ahụ, jiri bọtịnụ pịa, LucidPix na - agbakwunye foto gị nke ọma ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe osise 3D dị egwu.
4. Nweta ihu
Ngwa dịka LucidPix, Snapchat, na Facebook ejirila AI na teknụzụ ihu ya. LucidPix na-eji ihu dị iche iche achọpụta ihu onye ọrụ maka njirimara "3D Face", nke na-enye ndị ọrụ ohere jide ma tụgharịa selfies ha na foto 3D. N'otu aka ahụ, Snapchat na-eji AI iji mata ihu ndị ọrụ na itinye nzacha ihu ihu na foto ndị ọrụ. Na Facebook, a na-eji ihu ihu mara iji mata ihu dị na foto ma kpọọ ndị ọrụ iji gosipụta onwe ha ma ọ bụ ndị enyi Facebook ha.
5. Ndị enyemaka Smart
Ikekwe, usoro AI kachasị ewu ewu na-abịa n'ụdị ndị enyemaka dijitalụ smart, dị ka Siri, Alexa na Ntụziaka Google. Ndị enyemaka nwere onwe nke AI nwere ike ịnara iwu olu gị ma sụgharịa ha n'omume, dị ka ịgbakwunye ihe na ndepụta ịzụ ahịa gị ma ọ bụ ịkpọ enyi. Enweghị ajụjụ ọ bụla na ndị na - enyere aka olu ga - aga n'ihu na - eto ma nwekwuo ike inyere anyị aka na ndụ anyị kwa ụbọchị.
6. Nzacha Spam
May nwere ike ịla azụ ikwere na igbe mbata email gị na-eji AI, mana ọ bụ eziokwu! Otu ihe dị mkpa nke igbe mbata gị, nzacha spam na-edozi ya site na usoro nke nyere aka mee ka ihe mbata mbata gị ghara ịdị. Ka oge na-aga, ihe nzacha spam na-aga n'ihu na-amụta site na akara dị iche iche, sitere na metadata email gaa na okwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu na ozi-e. Gmail onwe ya nwere ike ime nke ọma kpochapu 99.9% nke spam site na iji igwe ya algorithms eme ihe.
7. Ndụmọdụ Media
Y’oburu n’icho ivedi TV Netflix, ị ga-ahụla ka Netflix gosipụtara ihe ngosi ndị ọzọ ozugbo ị nwere ike ịnụ ụtọ ilele. YouTube bụ usoro ọzọ nke ahụ na-atụ aro usoro vidiyo ị nwere ike ịmasị ya ọzọ ka ị gụchara vidio otu. Ọrụ mgbasa ozi dijitalụ abụọ a nyochaa ọtụtụ narị ndekọ ịtụ aro fim, ihe nkiri sịnịma, na vidiyo ị nwere ike ịmasị dabere na mmeghachi omume mbụ gị na nhọrọ mgbasa ozi.
8. Banlọ akụ Onlinentanetị
Ọtụtụ ụlọ akụ na-enyefe ndị ahịa ha nkwụnye ego maka nlele, na-ejikwa ya ngwa igwe. Appslọ akụ na-akụ ichekwa ego na-enwe ike ịmata ma na-agụ aka gị iji sụgharịa nke ahụ na nlele dijitalụ. Ọzọkwa, AI na-ejikwa azụmahịa iji aghụghọ eme ihe. FICO, ọrụ akara kredit, na-eji mmụta igwe iji zụlite akara FICO akara gị ma chọpụta ogo ihe ịga nke onye ahịa ọ bụla. A na-eziga ozi a n'ụlọ akụ ka ụlọ akụ wee nwee ike chọpụta nke ndị na-achọ akwụkwọ bụ ego na - akwụghị ụgwọ ọ bụla.
9. Ugbo ala
Driving na-anya onwe na ugbo ala, nke a makwaara dị ka ugbo ala, na-eji igwe amụrụ iji amata oghere dị n'akụkụ ụgbọ iji kwọta ndị njem na-enweghị ha ijide ụgbọ ahụ. Companylọ ọrụ Tech Nvidia na-eji AI “[na-eme ka] ụgbọ ala elekere rụọ ọrụ buru oke nnukwu data ihe mmetụta ma mee mkpebi oge ịkwọ ụgbọala.” yana ndi ya na ha n’enweko ugboala dika na naa, Toyota, Mercedes-Benz, Audi, na Volvo.
10. Ihe dị n’ụlọ
Agbanyeghị na ihe atụ itoolu gara aga nke ọgụgụ isi bụ ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ sọftụwia, nke ahụ apụtaghị na AI abịaghị n'ụdị igwe nkịtị. I nwekwara ike inwe ụfọdụ n’ụlọ nke gị! Ihe mkpuchi nhicha nke Roomobot na-eji AI nyochaa ogo ime ụlọ ahụ ọ dị, chọpụta ihe mgbochi, yana ikpebi ụzọ kachasị arụ ọrụ iji kpochapu oghere ahụ.
Ihe atụ kachasị amasị anyị nke ọgụgụ isi
Budata LucidPix maka gam akporo or Budata maka iPhone! Gbalịa ịkesa foto gị na ibe Facebook nke LucidPix maka ohere iji gosipụta gị n’otu ahụ! Nwere ike kerịta ha Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix, LucidPix 3D foto na Facebook, ma ọ bụ ibe Facebook Facebook 3D ọzọ!